इटालीको एकीकरण Info. About. What's This?
देशानुसार युरोपको इतिहास
ⓘ इटालीको एकीकरण
इटालीको एकीकरण १९ औँ शताब्दीको इटलीमा एक राजनैतिक र सामाजिक अभियान थियो । यस अभियानको सुरुवात र अन्त तिथि इतिहासकारमा विवाद छ ।
मेज्जिनीले युवा इटाली Young Italy नामक संस्था स्थापना गरी इटालीलाई गणतन्त्र राज्य बनाउने लक्ष्य राखेका थिए । त्यसैले उनलाई ´इटालियन राष्ट्रियताको जनक´ मानिन्छ ।
काबुरCavour इटालीको पिडमन्ट र सार्डिनियाका राजा इमान्युअलका प्रधानमन्त्री थिए । उनले इटालीका स-साना राज्यहरूलाई एकीकरण गरी इटालीलाई एउटा विशाल र शक्तिशाली राष्ट्र बनाउन महत्त्वपूर्ण काम गरे ।
4. १८५६को पेरिस शान्ति सम्मेलन
क्रीमियाको युद्धमा रुसी साम्राज्य र अटोमन साम्राज्य टर्की बीच लडाइँ भयो । बेलायत र फ्रान्सले टर्कीको पक्षमा सहायता गरेकोले काबुरले पनि उनीहरूलाई साथ दिए । अन्त्यमा टर्की, बेलायत र फ्रान्स पक्षको विजय भएकाले सन् १८५६ को पेरिस शान्ति सम्मेलनमा सार्डिनियाले पनि भाग लिने मौका पायो । यस अवसरमा अस्ट्रियाले इटालीमा गरेको अत्याचारका विरुद्ध काबुरले आवाज उठाउने मौका पाए । उनको अस्ट्रियाविरोधी भनाइलाई बेलायत र फ्रान्सले सहानुभूति देखाए ।
5. रोम माथी नियन्त्रण
: हाम्रो राष्ट्रिय एकता पूर्ण भयो, अब हाम्रो कार्य राष्ट्रलाई महान बनाउनु हो।
Wikipedia: इटालीको एकीकरण